Global Voices teny Malagasy » Madagasikara: Fiarahamonina, Maha-izy Azy Ary Ny Zanaka Ampielezana Malagasy · Global Voices teny Malagasy » Print
Madagasikara: Fiarahamonina, Maha-izy Azy Ary Ny Zanaka Ampielezana Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2017 5:17 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika (fr) i Rakotomalala, imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Amerika Avaratra, Etazonia, Frantsa, Italia, Kanadà, Madagasikara, Soisa, Vietnam, Fifindràmonina, Fiteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka
(Fanamarihana: Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2007)
Toa ny matetika mitranga ao amin'ireo firenena ao atsimon'i Sahara, maka toerana sarobidy ny zanaka ampielezana malagasy ao anatin'ny hetsika ara-kolotsaina, politika, ary ”virtoaly” mifandraika amin'i Madagasikara. Ao amin'ny tambajotra, sakana lehibe ho an'ny fandraisana anjara bebe kokoa avy amin'ireo mpitoraka blaogy ao Madagasikara amin'ny resaka virtoaly manerantany ny famerana ny ”bande passante”.
Kanefa nivoatra be ny tontolon'ny blaogy malagasy nanomboka tamin'ny fiandohany, folo taona lasa izay, raha toa ka mpitoraka blaogy vitsivitsy ihany no tena nazoto.
Miitatra ao Saigon ka hatrany Vancouver ny tontolon'ny blaogy malagasy miaraka amin'ireo manda mahazatra toa an'Antananarivo, Parisy, Roma, Zenevy, Washington DC, sy Montréal. Amin'ny teny malagasy, frantsay, anglisy na italiana no hifampitohizan'ny resaka. Ankehitriny, misy ireo malagasy mpitoraka blaogy fantatra toy ny mpikatroka, ny sasany mpanaramaso. Ny blaogy sasany dia manana ny maha-izy azy manokana, ny sasany misokatra kokoa ho an'ny fiarahamonina. Kanefa, matetika miverina eo amin'ny fanontaniana ny maha-izy azy ny kolontsaina ny resaka, indrindra ho an'ireo fiarahamonina any am-pitandranomasina. Nisy fihaonambe ara-panatanjahantena iray nokarakaraina tao Washington, D.C izay nanasàna ny Malagasy rehetra mipetraka any Amerika Avaratra  ho aminà fifaninanana am-pirahalahiana taminà taranjam-panatanjahantena maro isan-karazany.
Nahomby tokoa ilay fihaonana. Antony niatombohan'ny resaka ihany koa izy io momba ny fomba fitondrantenan'ireo fiarahamonina Malagasy isan-karazany any ivelany.
Mitantara  i Sipakv:
“Feno fomba fijery ratsy mikasika ireo Gasy mipetraka any Andafy manerana ny tranonkala sy ny tontolom-bolongana, tsy andeha hiverina haka indray ireo hevitra nalaina tany an-kafa aho, fa amin'ny ankapobeny, iombonako hevitra ilay hoe rehefa tsy manana zavatra tsara ho lazaina isika, aleho lavitra mangina…”
”Na izany aza, tsy maintsy miaiky aho fa tena samihafa be amin'ireo malagasy ao Frantsa ireo fiarahamonina malagasy hitako taty Etazonia ( Tsy afaka miteny amin'ny anaran'ireo kanadiana aho satria tsy dia fantatro tsara izy ireo ). Angamba mety noho ny hakelin'ny isan-dry zareo, angamba mety noho ny tontolo iainantsika, sa angamba mety hoe noho ny fitaizàna azon'ny malagasy tonga teto, iza no mahalala?
Raha ny fahitako manokana aloha dia tsy dia manana ilay fisainana manavaka saranga loatra ny malagasy ary tsotsotra kokoa (fandikan'ny mpanoratra: mora iaraha-miaina). Manana ny zo tsy hiombon-kevitra amiko tokoa ianao, Kanadiana na ireo Be Kintana hafa (fandikan'ny mpanoratra: mponina ao Etazonia). Zavatra iray nahaliana ahy hatrizay ny fomba hamolavolan'ny tontolo iainantsika antsika…”
Manontany ny fiarahamonina Malagasy  ny antony nahatonga azy ireo haniry ny handao ny firenena na hanapaka hevitra ny hiverina ao i Tattum:
“'Ho an'ireo mipetraka ao Madagasikara hatramin'izay, fa maninona ianareo (ny ankamaroany aloha) no manonofy ny handeha? Ho an'ireo niondrana, fa maninona no mihevitra ianareo fa mety tsy hiverina any Madagasikara intsony? Ho an'ireo lavitra, fa maninona no maniry ny tena tsy maintsy hody ianareo? »
Manana famaritana tsara momba ny iray amin'ireo fihodinkodin'ny fehezanteny amin'ny teny malagasy araka izay itenenan'ireo tanora azy ankehitriny i Hery izay monina ao Italia. Manoratra amin'ny teny gasy izy: 
“Ny teny hoe “Sady tsotra no simple” dia fomba fiteny anisan’ny tautologie (famerenana hevitra mitovy ananan'ny teny) ampiasain’ny tanora malagasy. Matoa izy mampiasa io teny io dia te-hanamafy bebe kokoa ny tena fahatsoran’ny zavatra lazainy. Tsy fanambaniana na fanamaivanan-javatra io fomba fiteny io fa efa fomba fisaina (“état d'âme”) mihitsy.”
Farany, nanasa ny fiarahamonina mba handray anjara tamina hetsika fanangonambola ho an'ny ankizy ao Madagasikara i Jogany sy i Harinjaka  tamin'ny Asabotsy 28 Jolay tamin'io taona io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/17/107233/
 nanasàna ny Malagasy rehetra mipetraka any Amerika Avaratra: http://www.masombahiny.com/RSMDC2007.html
 Manontany ny fiarahamonina Malagasy: http://tattum.canalblog.com/archives/2007/07/16/5635340.html
 Manoratra amin'ny teny gasy izy:: http://hery.blaogy.com/post/4/3162